FUNDA NGOLUNYE ULWIMI Cakchiquel (Western) ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iban Isi-Itali IsiBhulu IsiCambodia IsiChitonga IsiChokwe IsiChol IsiCibemba IsiCinyanja IsiDangme IsiEwe IsiFrentshi IsiGa IsiGarifuna IsiGreenland IsiHmong (White) IsiKaren (SaseS'gaw) IsiKikaonde IsiKikongo IsiKiluba IsiKimbundu IsiKongo IsiKwangali IsiKwanyama IsiLaotia IsiLingala IsiLunda IsiLuvale IsiMaltese IsiMam IsiMambwe-Lungu IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNahuatl (saseNorthern Puebla) IsiNdebele IsiNdonga IsiNgabere IsiNgesi IsiNzema IsiOtetela IsiPhuthukezi IsiPidgin (SaseCameroon) IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseCuzco) IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiTahiti IsiTlapanec IsiTojolabal IsiTotonac IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTwi IsiUmbundu IsiUruund IsiVenda IsiWayuunaiki IsiXhosa IsiZulu
“Sinalo uthando, kuba wasithanda kuqala.”—1 YOHANE 4:19.
IINGOMA: 56, 138
UYE UVAKALELWE NJANI NGOYEHOVA XA UCINGA . . .
ngendlela akunyamekela ngayo?
ngenyaniso akufundise yona?
ngendlela akuqeqesha ngayo?
1, 2. UYehova usifundise njani ukumthanda?
EYONA ndlela utata anokubafundisa ngayo abantwana bakhe kukuba abe ngumzekelo. Xa ebonisa abantwana bakhe ukuba uyabathanda, ubafundisa indlela yokuthanda abanye. Akukho mntu owakha wasithanda njengokuba uBawo wethu, uYehova, esithanda. Ngoko sitsho sifunde ukuthanda abanye “kuba wasithanda kuqala.”—1 Yohane 4:19.
2 UYehova usibonise njani ukuba “wasithanda kuqala”? IBhayibhile ithi: ‘Ngoxa sasisengaboni, uKristu wasifela.’ (Roma 5:8) UBawo wethu onothando, uYehova, wanikela ngoNyana wakhe waba yintlawulelo ukuze asihlangule esonweni nasekufeni. Esi sipho sixabisekileyo sasivulela indlela yokuba sikwazi ukusondela kuYehova size simbonise indlela esimthanda ngayo. Xa wancama unyana wakhe ngolo hlobo, uYehova wasimisela umzekelo. Wasifundisa ukuba sithande ngokuthi singacingeli iziqu zethu nokuba sibe nobubele.—1 Yohane 4:10.
3, 4. Sinokubonisa njani ukuba siyamthanda uThixo?
3 Uthando lolona phawu luphambili lukaYehova. Siyaqondakala ke isizathu sokuba uYesu athi owona mthetho ubalulekileyo ngulo: “Uze umthande uYehova uThixo wakho ngentliziyo yakho iphela nangomphefumlo wakho uphela nangengqondo yakho iphela nangamandla akho ephela.” (Marko 12:30) UYehova ufuna simthande ‘ngentliziyo iphela.’ Ebeya kukhathazeka ukuba bekukho umntu okanye into esiyithanda ngaphezu kwakhe. Kodwa uthando esinalo alumelanga lube yimvakalelo nje engaphakathi. UYehova ufuna simthande ‘ngengqondo nangamandla ethu ephela.’ Loo nto ithetha ukuba ukuthanda uYehova kubandakanya indlela esicinga ngayo nezenzo zethu.—Funda uMika 6:8.
4 Ngoko simele simthande uYehova ngento yonke esinayo. Xa simbeka kuqala ebomini bethu, simbonisa ukuba simthanda nyhani. Kwinqaku elandulela eli, sithethe ngeendlela ezine uYehova ababonisa ngayo abantwana bakhe ukuba uyabathanda. Ngoku makhe sibone indlela esinokumthanda ngayo ngakumbi uYehova nendlela esinokumbonisa ngayo loo nto.
BONISA UYEHOVA UKUBA UNOMBULELO
5. Yintoni esiye sifune ukuyenza xa sicinga ngazo zonke izinto asenzele zona uYehova?
5 Xa umntu ekunika isipho, udla ngokumbonisa ukuba unombulelo. Kuba usixabisa eso sipho, uye usisebenzise. UYakobi wathi: “Sonke isipho esilungileyo naso sonke isipho esigqibeleleyo sivela phezulu, kuba sihla sivela kuYise wezikhanyiso zesibhakabhaka, kwaye yena akaguquguquki njengesithunzi.” (Yakobi 1:17) Siyibulela kakhulu into yokuba uYehova esinika yonke into esiyidingayo ukuze siphile size sonwabe. Siyayiqonda indlela asithanda ngayo, yaye sifuna ukumbonisa ukuba nathi siyamthanda. Ngaba wena uvakalelwa ngaloo ndlela?
6. Yintoni ekwakufuneka amaSirayeli ayenze xa ayefuna uYehova aqhubeke ewasikelela?
6 Zininzi izinto ezintle awazifumanayo amaSirayeli kuYehova. Kangangamakhulu eminyaka, wayewakhokela ngemithetho yakhe, ewanika yonke into awayeyidinga ukuze aphile. (Duteronomi 4:7, 8) NamaSirayeli ayenokubonisa umbulelo wawo ngokuyithobela imithetho kaYehova. Ngokomzekelo, xa amaSirayeli ayebingelela kuYehova, kwakufuneka amnike “eyona intle kwintlahlela yomhlaba.” (Eksodus 23:19) AmaSirayeli ayesazi ukuba uYehova wayeza kuqhubeka ewasikelela ukuba nje ayemthobela aze amkhonze ngako konke anako.—Funda iDuteronomi 8:7-11.
7. Singazisebenzisa njani ‘izinto zethu zexabiso’ ukuze sibonise uYehova ukuba siyamthanda?
7 Nathi singambonisa uYehova ukuba siyamthanda ngokumnika ‘izinto zethu zexabiso.’ (IMizekeliso 3:9) Loo nto siyenza ngokumzukisa ngezinto esinazo. Ngokomzekelo, sinokunikela ngemali ukuze sixhase umsebenzi woBukumkani owenziwa ebandleni lethu nasehlabathini lonke. Enoba sinemali eninzi okanye akunjalo, sonke singasebenzisa izinto esinazo ukuze sibonise uYehova indlela esimthanda ngayo. (2 Korinte 8:12) Kodwa zikho nezinye iindlela esinokumbonisa ngazo uYehova ukuba siyamthanda.
Okukhona simthemba uYehova, kokukhona simbonisa ukuba siyamthanda
8, 9. Yiyiphi enye indlela esimbonisa ngayo uYehova ukuba siyamthanda? Yintoni eyenziwa nguMike nentsapho yakhe?
8 UYesu wasifundisa ukuba sihlale sifuna uBukumkani kuqala yaye singabi nexhala lokutya nempahla. UBawo wethu usithembisa ukuba uza kusinika into esiyidingayo. (Mateyu 6:31-33) Siyamthemba uYehova ibe siyazi ukuba uza kusizalisekisa eso sithembiso. Kaloku xa umthanda umntu, uyamthemba. Enyanisweni, okukhona simthemba uYehova, kokukhona simbonisa ukuba siyamthanda. (INdumiso 143:8) Ngoko simele sizibuze: ‘Ngaba izinto endiceba ukuzenza nendlela endiwasebenzisa ngayo amandla am zibonisa ukuba ndimthanda nyhani uYehova? Ngaba ndimthemba yonke imihla uYehova ukuba uza kundinyamekela?’
9 UMike nentsapho yakhe bathembela kuYehova. Xa uMike wayeselula, wayefuna ukuya kushumayela kwelinye ilizwe. Nasemva kokuba etshatile waza wanabantwana ababini, wayesenawo loo mnqweno. Xa uMike nentsapho yakhe bafunda ngabanye abazalwana noodade ababekhonza apho kufuneka abavakalisi abangakumbi, bagqiba kwelokuba baphile ubomi obulula. Bathengisa indlu yabo baya kuhlala kwindawo encinane. UMike wanciphisa ishishini lakhe lokucoca waza wafunda indlela anokuliqhuba ngayo ekwelinye ilizwe esebenzisa i-intanethi. Ngenxa yoko, uMike nentsapho yakhe batsho bakwazi ukufudukela kwelinye ilizwe, yaye kwaba mnandi kakhulu ukushumayela apho. UMike uthi, “Satsho sakubona ukunyanisa kwamazwi kaYesu akuMateyu 6:33.”
CAMNGCA NGEZINTO UYEHOVA AKUFUNDISA ZONA
10. NjengoKumkani uDavide, kutheni simele sicamngce ngezinto esizifundayo ngoYehova?
10 UKumkani uDavide wakha wathi: “Amazulu avakalisa uzuko lukaThixo; yaye isibhakabhaka sixela umsebenzi wezandla zakhe.” Wongeza wathi: “Umthetho kaYehova ugqibelele, ubuyisa umphefumlo. Isikhumbuzo sikaYehova sikholosekile, simenza abe nobulumko ongenamava.” Njengokuba uDavide wayecamngca ngemithetho kaYehova yobulumko nendalo yakhe ebukekayo, wasondela nangakumbi kuYehova yaye wafuna ukumbonisa ukuba uyamthanda. UDavide wathi: “Amazwi omlomo wam nokucamngca kwentliziyo yam makukukholise, Yehova Liwa lam noMkhululi wam.”—INdumiso 19:1, 7, 14.
11. Singalusebenzisa njani ulwazi asinika lona uYehova ukuze simbonise ukuba siyamthanda? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)
11 Namhlanje, uYehova usifundisa izinto ezininzi ngaye, ngenjongo yakhe, ngendalo nangeLizwi lakhe. Ihlabathi likhuthaza abantu ukuba bafunde, kodwa imfundo ephakamileyo idla ngokubenza bayeke ukuthanda uThixo. Kodwa yena uYehova akapheleli nje ekufuneni sibe nolwazi, kunoko uphinda asincede sibe nobulumko. Ufuna sisebenzise izinto esizifundayo ukuze zincede thina nabanye. (IMizekeliso 4:5-7) Ngokomzekelo, ufuna sabelane nabanye ‘ngolwazi oluchanileyo lwenyaniso’ size sibancede basinde. (1 Timoti 2:4) Sibonisa ukuba siyamthanda uYehova nabantu ngokubafundisa ngoBukumkani bukaThixo nezinto obuza kubenzela zona.—Funda iNdumiso 66:16, 17.
12. Wathini omnye udade ngesipho esivela kuYehova?
12 Nabantwana bangakwazi ukucamngca ngazo zonke izinto abanike nabafundise zona uYehova. UShannon usayikhumbula nangoku indlela awaziva ngayo kwindibano awayeye kuyo xa wayeneminyaka eyi-11, udadewabo eneminyaka eyi-10. Kwinxalenye ethile yocwangciso lweNdibano Yesithili “Yokuhlonela UThixo,” bonke abantwana, kuquka uShannon nodadewabo, bacelwa ukuba baye kuhlala kwindawo eyayilungiselelwe bona. Ekuqaleni wayesoyika, kodwa wothuka xa umntwana ngamnye wanikwa incwadi ethi Imibuzo Yabantu Abaselula—Iimpendulo Eziluncedo. Esi sipho sihle kangaka samenza wavakalelwa njani ngoYehova? Uthi: “Ndayibona apho into yokuba uYehova ngumntu wokwenene yaye undithanda kakhulu. Sivuya kakhulu kuba uThixo wethu, uYehova, esinika izipho ezihle kangaka!”
VUMA UKUQEQESHWA NGUYEHOVA
13, 14. Simele sithini xa uYehova esiqeqesha, yaye ngoba?
13 IBhayibhile ithi: “Lowo amthandayo uYehova uyamohlwaya, njengoko noyise esenjenjalo kunyana akholiswayo nguye.” (IMizekeliso 3:12) Xa sivumela uYehova ukuba asiqeqeshe aze asilole, sifunda ukwenza izinto ezilungileyo size sibe noxolo. Kakade ke, “akukho ngqeqesho ibonakala ivuyisa okwangoku, kodwa ibuhlungu.” (Hebhere 12:11) Nakuba kunjalo, simele sithini xa uYehova esiqeqesha? Masingaze sisibethe ngoyaba isiluleko sikaYehova okanye sihlale siqumbile xa sixelelwa into esingafuni ukuyiva. Siyamthanda uYehova, ngoko siyammamela size sitshintshe izinto afuna sizitshintshe.
Xa sisenza utshintsho olumkholisayo uYehova, simbonisa ukuba simthanda nyhani
14 Ngemihla kaMalaki, amaYuda amaninzi awazange ammamele uYehova. Ayengayikhathalele into yokuba imibingelelo yawo ingamkholisi. Ngoko uYehova wawaluleka ngokuqatha. (Funda uMalaki 1:12, 13) Wawaluleka izihlandlo ezininzi, kodwa ayengamphulaphuli. Ngoko wathi kuwo: “Ndiya kuthumela kuni isiqalekiso, kwaye ndiza kuziqalekisa iintsikelelo zenu.” (Malaki 2:1, 2) Kucacile ke ukuba, xa singasamkeli isiluleko sikaYehova okanye sivakalelwe kukuba asibalulekanga, siya kuphulukana nobuhlobo naye.
Kunokuba ucinge ngento ethandwa lihlabathi, cinga ngento efunwa nguYehova (Jonga isiqendu 15)
15. Yiyiphi indlela yokucinga esimele siyiphephe?
15 Ihlabathi likaSathana likhuthaza abantu ukuba babe nekratshi baze bacingele iziqu zabo. Abaninzi abakuthandi ukulungiswa okanye ukuxelelwa into amabayenze. Abanye bamamela nje kuba benyanzelekile. Asifanele sibe njalo thina. IBhayibhile isixelela ukuba masingamilisi “okwale nkqubo yezinto.” Kunoko, simele siqonde oko uYehova akulindeleyo kuthi size senze akuthandayo. (Roma 12:2) Usebenzisa intlangano yakhe ukuze asinike isiluleko ngexesha elililo. Ngokomzekelo, sikhunjuzwa indlela esimele siziphathe ngayo xa sikunye nabantu besini esahlukileyo, indlela yokukhetha abahlobo nendlela yokukhetha izinto esinokuzenza xa siphumlile okanye sizipholele. Xa sivumela uYehova ukuba asiqeqeshe size senze utshintsho olumkholisayo, simbonisa ukuba siyakuxabisa ukukhokelwa nguye yaye simthanda nyhani.—Yohane 14:31; Roma 6:17.
THEMBELA KUYEHOVA UKUZE AKUNCEDE AZE AKUKHUSELE
16, 17. (a) Kutheni simele sazi ukuba ucinga ntoni uYehova ngaphambi kokuba senze izigqibo? (b) Kunokuba athembele kuYehova, yintoni awayenzayo amaSirayeli?
16 Abantwana bathembela kubazali babo ukuze babancede baze babakhusele. Nabantu abadala bakhe balufune uncedo kubazali babo. Bayazi ukuba nangona benokuzenzela izigqibo, bangafumana amacebiso amahle kubazali babo. UBawo wethu, uYehova, uyasivumela sizenzele izigqibo, kodwa ekubeni simthemba yaye simthanda, sihlala sicela uncedo kuye size sizame ngazo zonke iindlela ukwazi into ayicingayo ngaphambi kokuba senze izigqibo. Xa sithembela kuYehova, uza kusinika umoya wakhe oyingcwele ukuze asincede senze izinto ezilungileyo.—Filipi 2:13.
17 Ngemihla kaSamuweli, amaSirayeli oyiswa ngamaFilisti edabini. Kunokuba abuze kuYehova into amele ayenze, athi: “Masiyithabathele kuthi ityeya yomnqophiso kaYehova eseShilo, ukuze ibe phakathi kwethu ize ibe nokusisindisa entendeni yeentshaba zethu.” Yaphumela entwenini loo nto? “Kwaba kukhulu kakhulu ukubulawa ngogonyamelo, kangangokuba kuSirayeli kwawa amawaka angamashumi amathathu amadoda ahamba ngeenyawo. Kwanetyeya kaThixo yathinjwa.” (1 Samuweli 4:2-4, 10, 11) AmaSirayeli ayecinga ukuba, xa enokuthatha iTyeya ahambe nayo, uYehova wayeza kuwanceda aze awakhusele. Awazange acele uncedo kuYehova okanye azame ukuqonda ukuba ucinga ntoni yena. Kunoko, ahamba ngayibonayo, kwaza kwafuneka ayibelek’ ikrwempa.—Funda iMizekeliso 14:12.
18. Ikufundisa ntoni iBhayibhile ngokuthembela kuYehova?
18 Omnye umdumisi owayethanda uYehova yaye ethembele kuye wakha wathi: “Lindela kuThixo, kuba ndisaya kumbonga njengosindiso oluzukileyo lwam siqu. Owu Thixo wam, umphefumlo wam uphelelwe lithemba ngaphakathi kum. Kungenxa yoko ndikukhumbula.” (INdumiso 42:5, 6) Ngaba nawe umthanda ngolo hlobo uYehova? Ngaba uziva usondele kuye yaye umthemba? Unako ukufunda ukumthemba nangakumbi. IBhayibhile ithi: “Kholosa ngoYehova ngayo yonke intliziyo yakho, ungayami ngokwakho ukuqonda. Uze umgqale yena ezindleleni zakho zonke, kwaye uya kuwenza uthi tye umendo wakho.”—IMizekeliso 3:5, 6.
19. Uza kumbonisa njani uYehova ukuba uyamthanda?
19 Xa wasithanda kuqala, uYehova wasifundisa indlela esimele simthande ngayo. Masihlale sicinga ngazo zonke izinto asenzele zona nendlela asithanda ngayo. Masimbonise ukuba simthanda ngentliziyo, ngomphefumlo, ngengqondo nangamandla ethu onke.—Marko 12:30.
UYehova wasifundisa indlela yokumthanda: UYehova akasixelelanga nje kuphela ukuba uyasithanda, kodwa usenzele izinto ezininzi ezibonisa ukuba uyasithanda. Okukhona sicinga ngendlela asithanda ngayo, kokukhona siya kumthanda ngakumbi size sifune ukumxelisa